Gabiley: Gobolka ugu dadka badan Somaliland |
Intay S​omaliland dimuqraadiyadu ka jirtay waxa halhays noqday: Cidday Gabiley u codayso ayaa guulaysata. Waxaan muran ka taagnayn inay Kursiga dalka u sarreeya ay reer Gabiley saareen madaxwayne Siilaanyo 2010 iyo Madaxwayne Biixi 2017. Xisbiyadoo dhanna qireen in Gabiley guusha lagu kala helo.
Waxa khamiistii dhowayd lagu dhawaaqay natiijada imtixaanka ee fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe iyo fasalada 4aad ee dugsiyada sare ee Somaliland. Xafiiska imtixaanaadku wuxuu soo saaray tirada guud ee ardayda u fadhiisatay labadaa imtixaan ee aan kor ku xusay. Isla markaa wuxuu xafiisku u kala dhigay tirada ardayda Gobol – Gobol. Waxa dadka Somaliland aad dhegahooga u soo jiitay tiro badnida ardayda ka soo baxday Gobolka Gabiley. Tiro ahaan waxay galeen ardayda gobolku kaalinta afraad. Waxa ka arday batay kaliya saddex gobol: Kaalinta 1aad: Gobolka Maroode-Jeex (gobolkan oo gobolada dalka oo dhan oo la isku daro ka tiro badan). Kaalinta 2aad: Gobolka Togdheer. Kaalinta 3aad: Gobolka Awdal. Kaalinta 4aad: Gobolka Gabiley ( oo ka tiro batay gobolada Sanaag, Sool iyo Saaxil). Arrintani waxay markhaati 2aad u tahay tiro badnida dadwaynaha deggen gobolka Gabiley.
Siyaasiintiisa gobolka oo qaybsan, badankooduna ay yihiin dad reer ahaan uun lagu doortay oon aqoon, garaad iyo hammi siyaasadeed oo sare aan lahayn.
Bulshada gobolka oon ahayn bulsho isku duuban, aan la hayn hoggaan dhaqan oo aqoon-siyaasadeed leh.
Guud ahaan dadka gobolka Gabiley oo qaddiyadda Somaliland aad iyo aad ugu wayn tahay, dantooda goboleedna ka hormariya qaddiyadda Somaliland iyo isku duubnida dadka Somaliland. Arki maysid odayada Gabiley oo sida reer Awdal, reer Sanaag ama gobollo kale qaylinaya; qaddiyadda ama ammaanka Somaliland ku hanjabaya haddaan dantooda reer ahaaneed loo fulin.
Qodobkan 3aad ammaan bay ku mudan yihiin reer Gabiley laakiin iyagoo dalka ilaalinaya waa inay dantooda goboleedna ka shaqeeyaan. Waa in codkooda siyaasadeed ee awoodda badan kula gorgortamaan xisbiyada qaranka. Waa inay madaxwayne Biixi u caddeeyaan inaan mar labaad la dooranayn hadduuna gobolnimada Gabiley dhaqaajin. Waa in siyaasiinta gobolka Gabiley, odayada iyo aqoon yahankuba u hawl galaan iskana kaashadaan sidii arrintani u meel mari lahayd.
Gabogabo: Reer Gabiley waa inay hurdada ka kacaan, dalkana horumarkiisa ka shaqeeyaan.